"Ary nony teo akaikin’ i Jeriko Josoa, dia nanopy ny masony izy ka nijery, ary, indro, nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tànany; ary nanatona Azy Josoa ka nanao taminy hoe: Namanay va Hianao, sa naman’ ny fahavalonay?" Josoa 5:13
"Dia nanodidina ny tanàna indray mandeha koa izy tamin’ ny andro faharoa ka niverina tany an-toby; henemana no nanaovany toy izany." Josoa 6:14
Taorian’ny fiomanana ara-panahy sy ny fampaherezana dia nanomboka naka ny tany Kanana ny taranak’Israely. Jeriko no tanàna voalohany harodana (6:1). Ny nisehoan’ilay Komandin’ny miaramilan’i Jehovah dia naneho fa an’Andriamanitra ny ady ary ny tany dia fanomezana avy amin‘Andriamanitra ho an’izay mahazo azy (5:13-14, Salamo 24:1-2). Ho mariky ny fanajana dia nanala ny kapany Josoa (15). Na dia efa nasandratr’i Jehovah ho mpitarika ny Israely aza izy (4:14) dia nanaiky nofehezin’ilay tena Mpitarika Lehibe. Ahoana no fomba anehoantsika ny fanajana sy ny fahatahorana an’Andriamanitra ?
Fanafihana an’i Jeriko: Filaharana tsy ara-miaramila fa ara-pivavahana tarihin’ny mpisorona mitondra trompetra no paik’ady nomen’ Andriamanitra (6:2-5). Nanatanteraka izany tsy am-pihambahabana Josoa sy ny vahoaka rehetra (6:7-14). Raha amin’ny fisainana sy fahendren’olombelona dia hadalana izany nefa dia nandresy ny Zanak’Israely. Ho antsika kristianina, ny Filazantsaran’i Kristy izay fahadalana amin’izao tontolo izao no herin’Andriamanitra amintsika (1 Korintianina 1:17-31 ;2 Korintianina 10:3-5).
Efa resy ny fahavalo: Vao tsy nanomboka akory ny ady dia efa niteny tamin‘i Josoa Andriamanitra hoe «efa natolotro eo an-tànanao Jeriko» (2). Nahazo toky Josoa ka niatrika ny ady tamim-pahasahiana.
Fampiharana: Isika kristianina ihany koa dia miatrika fahavalo efa resy. Satana ilay fahavalontsika dia efa noravan’i Jesosy Kristy (Hebreo 2:14-15, 1 Jaona 3:8). Na izany aza, mbola miady isan’andro isika, mahery vaika ny fihazakazaky ny fitaoman’ny ota eo amin’izao tontolo izao.
Hafatra: Aoka tsy ny tahotra ny herin’ny fahavalo no hihazona antsika tsy hihetsika fa mpiantafika mandresy isika noho ny herin’i Kristy (Lioka 22:31-32, Rômanina 8:37-39).